ဆိုးသွမ်း: သူတို့ဆီက ၅၀ ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီက ၅၀
၀င်ငွေရော..လူနေမှုအဆင့်အတန်းရော ကွာတာကိုး အစ်ကိုရဲ့...
နောက်ပီး.. ဘာသာရေးခံယူချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်လေ.. ကိုယ့်ဆီမှာက အသက်(၅၀)ကျော်လာရင် ဘုရားသွားကျောင်းတက်ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်လာကြတာကိုး... :D
(ဟုတ်လားတော့မသိပူး ၀င်ဖောသွားတယ်.. :D)
အစ်ကိုလည်းပြန်ဖို့နီးလာပြီပဲး) 2010 လောက်ဆို ကျနော်တို့သိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ အဲ့မှာရှိတော့မှာတောင်မဟုတ် ။
ဒီကအသက် ၅၀ ကျော်အဖွားကြီးတွေဆို ဆေးလိပ်လက်ကြားညှပ် ဖဲဝိုင်းမှာ ဘီယာမော့နေကြပြီး ဒါတောင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနော် အဝေးကြီးဆိုရင်တော့ ...............။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာ ပိုသိလာတယ်..
ညီလေးရေ မြန်မာပြန်ရောက်လည်း နိုင်စွမ်းသလောက်တော့ စာကောင်းလေးတွေ ရေးပါကွာ..
အင်တာနက်က အရမ်းတော့ မခက်တော့ပါဘူး တချို့တွေလည်း local ကပဲရေးနေကြတာလေ..
အမိမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာ နိုင်စွမ်းရာက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေကွာ..
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တော့ သူတို့ ဆီက ၅၀ ကျွန်တော်တို့ ဆီက ၅၀ဆိုတော့ ပိုက်ဆံမှတ်လို့ 
အထက်က အကိုတွေ အမတွေပြောသလိုပါဘဲ
၀င်ငွေ ၊နေထိုင်မှုအပေါ်မှာ အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
သူတို့ ဆီမှာက လူ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀အသုံးချနေကြတာ
ဒီမှာဆို အဖွားကြီးတွေ အေရိုးဖစ်ကကောင်းတုန်း
မြန်မာအဖွားတွေကျတော့ ၅၀ ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာသာရေးကျောင်းသွားတာများတယ်။
သူများနိုင်ငံမှာလည်း ပိုက်ဆံရှိပေမဲ့ အဲဒါတွေကို ဦးစားမပေးတဲ့ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူတွေ အများကြီးပါ၊ ဟုတ်ပါတယ် ဘာသာရေးကွာခြားလို့ လို့ပြောကြတယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်သူတွေဟာ ဘာသာရေး၊ ဘုရားဆိုတာကို မရှိလို့ပါ၊ ကျမတို့ ဘာသာရေးမှာလည်း အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကို အရှိအတိုင်းဖန်ဆင်းပေးတဲ့ ဘုရားကို စော်ကားပြီး၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုတတ်၊ ပိုတော်တယ်လို့ ထင်တဲ့ သူလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်၊ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ မှာရှိသူတွေအားလုံးဟာ ဘာသာရေးအတူတူဘဲ လို့ထင်မှတ်မယ်ဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်ကို ပြသခြင်းဘဲလို့ ကျမထင်ပါတယ်၊ အနောက်နိုင်ငံမှာလည်း အသက် ၆၀ ရောက်လို့၊ အငြိမ်းစားယူပြီး၊ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူ၊ အများအကျိုး သယ်ပိုးနေသူဟာ ၁၀၀ မှာ ၇၀ လောက်တောင်ရှိနေတယ် ဆိုရင် အံ့သြကြမလားဘဲ။ အင်ဂျလီနာဂျိုလီ မွေးစား သား၊သမီးတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာက သိပေမဲ့၊ နာမည်ကြီး ခရစ်ယာန်အဆိုတော် အများစုက၊ တလင်တမယားစနစ်နဲ့၊ မွေးစား သားသမီးတွေ ၈ယောက်လောက်ရှိတာ လူတွေ မသိသေးတော့၊ အားလုံးကို ခြုံပြီးပြောလို့ မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်၊ အတတ်ပညာ ကွာခြားမှု့လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့၊ အရှေ့တိုင်းလူမို့ ဘာသာရေးက ဒီလို၊ အနောက်တိုင်းလူမို့ ဘာသာရေးက ဒီလိုဆိုပြီး ခွဲခြားပြောလို့ မရဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဆိုင်လားတော့ မသိဘူး၊ ကွန်မန့်တွေမှာ ဖတ်ရတာတွေနဲ့ ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး ရင်ထဲရှိတာကို ပြောလိုက်တာပါ။ ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း အသက်ကြီးမှ မဟုတ်ဘူး၊ ငယ်ကတည်းက ဘုရားကျောင်းကန်၊ သာသနာလုပ်ငန်းနဲ့ မကင်းကွာသူ ဒုနဲ့ဒေးရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်တဲ့ သဘောလေးပါဘဲ။
သူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူပေါ. ဒါပေမယ့် ခုအဲဒါတွေ မြန်မာ ပြည်က လူချမ်းသာတွေဆီကို ကူးစက်နေပါပြီ.
ကျွန်တော် စကားပြောမှားသွားရင် sorry ပါဗျာ..
တခြားသူတွေကို ပုတ်ခတ်သလို ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်...
အေးလေ..မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ပဲ ဘလော့ဂ်လောကကြီးကိုခွဲရတော့မလား။ တို့ ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲ။
ဒါနဲ့ ထိုင်းကတို့ ပါမောက္ခ ၅၀ ကျော်ဆရာမတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အေရိုးဗစ်ကစားတယ်။
အင်းခြုံပြောလို့တော့ မကောင်းပါဘူး။ဘယ်ရှု့ထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့်ပေါ့။ ဒီလိုခေတ်မီလာလို့ နှလုံး၊ကျောက်ကပ်၊ အမွှာပူးတွေ မြန်မာမှာတောင် ခွဲစိတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါပြီး။ ဒီပညာတွေရဲ့ အခြေခံက အနောက်တိုင်းပဲပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနောက်တိုင်းရဲ့ တိုးတက်မှုကို ငါတို့အရှေ့တိုင်းတွေ အားကုန်လိုက်နေစဲပဲလေ...။ ကျွန်မ အနောက်တိုင်းကို အထင်ကြီးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားတစ်ခုကို လက်ခံထားတာပါ။ အကောင်းနဲ့ အစိုးအမြဲရှိနေတဲ့ ဒီကမ္ဘာမှာ အနောက်တိုင်းမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး မြန်မာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သေတဲ့အထိတောင် အပိုးမကျိုးတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ မြန်မာမှာလဲ မျက်ရစ်ခွဲတာတို့ ဘာတို့လုပ်နေတာတွေ အများကြီးပါ။ အသေးအဖွဲဆိုပေမယ့် အမျိုးအစားတူတွေပေါ့။ လူတစ်ဦးစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုကို လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အကျင့်စရိုက်အနေနဲ့ သတ်မှတ်တာတော့ မသင့်တော်ဘူးပေါ့နော်... အားပေးလျက်ပါ brother in law....
ကိုဆိုးသွမ်းကတော်ကြီးကိုရော ၅၀ ကျော်လာရင် ဆီလီကွန်ထည့်ခိုင်းမှာလား ... ဘုရားသွားကျောင်းတက်ခိုင်းမှာလားဟင် ????
ချတာ ... ချိတ်ချိုးရဘူးနော် :P
ပြောချင်တာက ဒီပို့စ်နဲ့သိပ်တော့မဆိုင်လှပါဘူး ... နောက်လေးငါးလဆိုရင် ဘလော့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးကိုစွန့်ခွာရတော့မယ်ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ပါ ...
ဆိုးသွမ်းနဲ့အစ်မ တစ်ခါမှစကားမပြောဖူးပေမယ့် စိတ်ထဲမယ်ခင်နေမိတယ် ... ဆိုးသွမ်းကိုစသိတာက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆိုးသွမ်းရဲ့ ငါ့တိုင်းပြည်လေးမှာဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ကော်ပီလုပ်ပြီး မေးလ်ပို့ပါတယ် ... အစ်မက ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီးသဘောကျလို့ ဘယ်ကရသလဲဆိုပြီးရှာတော့ ကဗျာခေါင်းစဉ်မှာလင့်ခ်ပါနေတာတွေ့ရတယ် .. အဲ့ဒါနဲ့ဆိုးသွမ်းဘလော့ကို နေ့တိုင်းနီးပါး လာဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ .... အစ်မ ပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ဘလော့ဆိုလဲ မမှားပါဘူး .. ဒီလိုနဲ့လူချင်းမသိပေမယ့် ဘလော့မောင်လေးအနေနဲ့ခင်မင်နေမိတာ ...း(